တရားမဝင်သယ်ဆောင်လာသော ကျွန်းသစ်များ ရထားပေါ်၌ ဖမ်းဆီးရမိကြောင်း သတင်းရရှိ
အမှတ် (၁၀၃) အဆန် ပျဉ်းမနား - တောင်တွင်းကြီး -ကျောက်ပန်းတောင်း လော်ကယ်ရထားပေါ်၌ သစ်များ တရားမဝင်သယ်ဆောင်လာကြောင်း သတင်းအရ မြို့နယ် သစ်တောဦးစီးအရာရှိ ဦးတင်ထွဏ်းနှင့် သစ်တောဝန်ထမ်းများ၊အမှတ် (၁၀၃) အဆန် ပျဉ်းမနား - တောင်တွင်းကြီး -ကျောက်ပန်းတောင်း လော်ကယ်ရထားပေါ်၌ သစ်များ တရားမဝင်သယ်ဆောင်လာကြောင်း သတင်းအရ မြို့နယ် သစ်တောဦးစီးအရာရှိ ဦးတင်ထွဏ်းနှင့် သစ်တောဝန်ထမ်းများ၊
စတုတ္ထအကြိမ် မဟာမဲခေါင်ဒေသခွဲ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးကို ဇန်နဝါရီလ၂၉ ရက်နေ့၊ နံနက် ၀၉:၀၀ နာရီက ကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းထွန်းအား Kyaik Ka San Land Development Pte. Ltd. မှ Chairman ဖြစ်သူ Mr. Takeshi Tanaka ဦးဆောင်သည့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှ လာရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းထွန်းသည် Kyaik Ka San Land Development Pte. Ltd. မှ Chairman ဖြစ် သူ Mr. Takeshi Tanaka ဦးဆောင်သော အဖွဲ့အား ယနေ့ ၂၇-၁-၂၀၁၅ ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ ၂:၀၀ နာရီတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး